Phumula nge-Debra Spa & Inn - I-Airbnb
Phumula nge-Debra Spa & Inn
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Deb
U-Deb Ungumbungazi ovelele
Hlanza nge-sanitizer ngaphambi nangemva kwesivakashi ngasinye. Nginakekela ngokuphelele ukuze ngiqinisekise impilo yakho.
Indawo yami ilungele abantu abashadile noma abahamba bodwa abeza endaweni yase-Dripping Springs. Yindawo enhle yokuhlala lapho uya emshadweni, uhlola izindawo ezenza iwayini, izindawo ezenza utshwala kanye nezindawo zokwenza utshwala, noma ngemva kokuqwala izintaba (amapaki amaningi asendaweni abhukhwa kuphela)
Ukushona kwelanga okuhle egcekeni elingaphambili nama-sunris kusuka ekamelweni lokulala ukushwibeka umnyango. Ukubukwa kwezinkanyezi ezinhle.
Ifulethi langasese eline-air conditioned eliphakathi linegumbi lokuphumula elinosofa, isihlalo sothando, i-Roku TV & ifeni kasilingi. Kunendawo encane yekhishi enosinki omncane, isiqandisi esincane ne-microwave. Asikho isitofu. Nginebhodwe lekhofi, ikhofi, itiye, ukhilimu kanye noshukela, kanye nokudla okulula okumbalwa. Ikamelo linombhede omkhulu ontofontofo onezindawo zokugcina izingubo eziseceleni ezingu-2, umnyango wesilayidi onikeza ukubukeka okuhle kokuphakama kwelanga uma ikhethini livulekile, nomphephezeli oxhunywe kusilingi. Umnyango wegumbi lokugezela usegumbini lokulala futhi uneshawa enkulu. Usinki wegumbi lokugezela usekhoneni legumbi lokulala.
Siphila kule ndlu endlini enhle, evulekile, enesitezi esisodwa.
Sine-acre ebiyelwe yegceke elinesihlalo sangaphandle kanye nendawo ehlanganyelwayo "yekhishi". Inendawo yokosa inyama ye-propane enesitsha esiseceleni, i-grill yamalahle nosinki onamanzi abandayo. Kuhlale kukhona i-ashtray lapho futhi.
Ukuhlala kuvulande ongaphambili wendlu enkulu, kuvumela ukubuka okuhle kompheme wethu onama-acre angu-16. Ihhashi nama-alpaca amahlanu afuya usuku lonke. Sinamadada amabili ahlala echibini lethu elinesitokwe futhi azulazula endlini. Owesifazane i-Peking Duck ubeka iqanda njalo ekuseni... hhayi nje endaweni efanayo, ngakho ukuzingela kweqanda njalo ekuseni.
Siphinde sibe nokuthile okuncane
chihuahua/terrier/Chinese crested mix inja ebizwa nge-King Harold Bluetooth.
Ekuseni nasekushoneni kwelanga amaxhama amaningi adlula edlelweni. Ngezinye izikhathi ebusuku balala egcekeni.
Izinyoni ezinomsindo ziheha abondli abalengiswe emphemeni ongaphambili wendlu enkulu, ikhishi langaphandle elingemuva kanye nezitshalo ezihlukahlukene ezizungeze igceke, ngaphandle uma zihamba ebusika.
Sinendlu kaMartin kanye nabondli bezinyoni abangu-2.
4.98 · 182 okushiwo abanye
Indawo yangakithi ithule kakhulu. Izindlu eziningi zisezindaweni okungenani ezingu-2.
Singaphansi kwamamayela angu-3 ukusuka endaweni engokomlando ye-Mercer Street futhi amamayela angaphezu kuka-2 ukusuka esitolo sokudla se-H-E-B kanye noTwin Licohol.
I-Dripping Springs ngumphakathi osemthethweni we-Black Sky, ngakho ukubuka izinkanyezi kuhle kakhulu.
I am a pretty laid back and happy massage therapist/ranchette woman who observes and listens, likes to dance in the honky tonks as often as possible, views and feels most every su…
Siyakuthanda ukuhlangana nabantu futhi sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise ngangokunokwenzeka.
Sinolwazi olukhulu mayelana namaHholo okudansa aseHill Country kanye nomculo odlalwa bukhoma wase-Austin. Singabagibeli bezithuthuthu futhi siyazijwayelanisa nemigwaqo eminingi yasendaweni ebukekayo.
Siyakuqonda nokuthula kwendlu yethu futhi siyaqaphela isidingo sokushiywa wedwa, uma sifuna.
Sicela usisize siqondise ngendlela ofisa ngayo ukwenza ukuhlala kwakho kube ngcono kakhulu.
Sobabili siziqashile futhi sihlezi sitholakala mathupha noma ngeselula.
Sinolwazi olukhulu mayelana namaHholo okudansa aseHill Country kanye…
UDeb Ungumbungazi ovelele